Ukunikezelwa kwe-Xperia Mini kunye ne-Xperia Mini-Pro | I-Androidsis
el_uliulius | | Sony
U-Sony-Nokia uchazile okuza kubakho Abaphumeleleyo kwiimodeli zosapho zeXperia, iMini neMini-Pro. Iimodeli ezibonakaliswa bubungakanani bazo obuncinci kunye noxinzelelo olulula olubanika ukufikelela kubaphulaphuli ababanzi, kwinguqulelo enayo okanye ngaphandle kwekhibhodi ebonakalayo.
Uninzi lweenkcukacha zesiphelo ziyagqithiswa ngokukhutshwa kwenkampani, okuya kuba koku kulandelayo:
Ubunzulu be imibala edibeneyo ngombala omnyama nomhlophe wangaphambili, umbala omnyama opinki nohlaza okwesibhakabhaka ngasemva kweMini. Umphambili omnyama kunye nomhlophe kunye ne-turquoise yeMini-Pro.
Inkqubo yokusebenza Isonka se-Gingerbread se-Android kuba bobabini bahamba nge Inkqubo ye-1 GHz yeQualcomm Snapdragon
Isikrini nge «anti-ukumakisha» entanjeni 3 intshi ngetekhnoloji ye-Injini ye-BRAVIA® kunye ne Isisombululo esingu-320 x 480 px.
Memoria I-320MB ROM, iyandiswa ngekhadi I-microSD ebandakanya i-2gb (okanye ukuba ufuna ngakumbi ...) kunye nememori 510MB RAM
I-Pesos I-94 gram iMini kunye I-136 gram iMini-Pro.
Ngokumalunga nobukhulu be-88-52-16mm yeMini. I-92- 53-18mm yeMini-Pro.
Ziza kubandakanya zombini Ikhamera engasemva eyi-5 MPX Nge-flash ye-LED, ene-autofocus kunye 720p HD ukurekhodwa. Baya kuzisa nefashoni ikhamera yangaphambili yeVGA yeefowuni zevidiyo
Ibandakanya Unxibelelwano lweGPS, iBluetooth, iDLNA itekhnoloji engenazingcingo, iWifi,
I-1200 mAh ibhetri
Ngezi terminals zimbini uSony-Ericsson uhlaziya inxenye yosapho lweXperia, ngakumbi ezincinci. Njengoko sibona kwinkcazo yayo, ezi zimbini zii-terminal ezinomda omncinci kwaye ezijolise ngokucacileyo kwabo bafuna umnxeba ukuba "bafowunele bathumele imiyalezo" (kwaye baphele nge-twitter, facebook nayo yonke into ekwi-mobile). Ngokuqinisekileyo ixabiso layo lihambelana nezibonelelo zalo nokuba zine-1GHz Snapdragon egqithisileyo kwimbono yam ithathela ingqalelo i-RAM encinci enayo ifowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » Ukunikezelwa kwe-Xperia Mini kunye ne-Xperia Mini-Pro
Juan Martinez sitsho
Andivumi ukuba ineprosesa eninzi yenkunzi yegusha encinci ...
Ndicinga ukuba i-510mb inikezela ngokwaneleyo, ndinomnqweno wokuba ndikhonzwa kakuhle kwaye andicingi ukuba zininzi iiterminal ezingaphezulu kwelo mali KWISIKOLO SASESPANISH.
Kubonakala ngathi ukongeza ekubeni fanboys yayo yonke into ephathwa yi-Android kunye neentshaba zabanye, ukwasekwe kwi "idonki enkulu, ukuhamba okanye hayi."
Into emnandi malunga nenkqubo yokusebenza ehlanganiswe nguGoogle kukwahluka kweetheminali, kuko konke ukuthanda nangaphezulu kwako konke, iipokotho. Masikhumbule ukuba nangona zinokuthengwa simahla, uninzi lwazo luzifumana ngenkxaso-mali ngesivumelwano kunye nomnye umsebenzisi, kwaye sele siyazi ukuba ezi nkxaso-mali zixhomekeke: kwiintlawulo eziphezulu zenyanga, ubuncinci bokusebenzisa kunye / okanye namaxesha amade okuhlala.
Imibuliso, kunye nokuvuyisana nebhlog, ndibhalisile kwiindaba zePulse, endicinga ukuba ndiyazi enkosi kuwe, bendizokucela kuphela ulwazi oluncinci olungakhethi cala. (Ngaphandle kokuba leyo yingongoma yakho eyomeleleyo, kodwa ndicinga ukuba ukuthobela akufuneki kubenjalo phakathi kwemigca yeendaba ezifanayo, ukuze yahlulwe, njengakwimihlathi ngokomzekelo)
Phendula kuJuan Martinez
I-Snapdragon yakho ayifani nale. Ndiphambi kwam Umnqweno kunye noMnqweno S (okwelinye inqaku) kwaye ndikwi-1GHz kwaye ngohlobo olufanayo lwengqondo kunye ne-Android azisebenzi okanye ziyafana, kwaye ukuba i-kernel kunye neminye iminqweno elungiselelwe kwaye enye ene-S iza ngaphandle kweHTC.
Ngale processor, iscreen esincinci, isisombululo esisezantsi, akukho ngqondo ... 1GHz ibonakala ngathi iprosesa eninzi. Ngenxa yokusikelwa umda kwezixhobo, awuyi kuba nakho ukusebenzisa uninzi lweapps eziza kusebenzisa i-100% yeprosesa (imidlalo ye-HD evela eGameloft ...) Ukuba ujonga iinkqubo ezinje ngesetcpu, ixesha elininzi iprosesa iyenza ungafikeleli nakwisiqingatha sesantya se-998mhz. Umnqweno wakho ngemini yawo ufike ngengqondo kunye nabanye, yiyo loo nto i-S iza nenkunzi yegusha engaphezulu, kuba nge-1ghz 576mb bawela phantsi, ngaphandle kokuphuculwa kwemisebenzi kunye nenkunzi yegusha evela kuhlobo 2.1 lwe-android.
Emva kwayo yonke loo nto, ndavakalisa olwam uluvo kwinqaku, nakuwe kwingcaciso, kwaye akukho namnye kuthi oya ejele. Andihlali ndibeka izimvo ezininzi ngaphakathi kwinqaku, ngakumbi ndibashiya kumhlathi wokugqibela (njengoko ndenzile kule).
Wowow, khange ndiqonde. Ndivela eMexico (tijuana) kwaye ndineXperia x 10 pro mini ukusukela ngoFebruwari walo nyaka (kwaye ibisemarikeni ngaphezulu kweenyanga ezimbini); Kwenzeka njani ukuba ubhengeze kwiposti yakho Ukuqaliswa kwale fowuni?
Ungandichazela?, Kuba ndihlala emzabalazweni apho uhlaziyo endinalo lufikelela ku-Android 2.1 kwaye andazi ukuba omnye uza kuphuma okanye uza kuhlala apho):
Ndicinga ukuba aniqondanga kakuhle uCesxr kodwa ubhengeza ukuvela kwe-Xperia mini pro (eyakho) ndiyaqonda ukuba ubuphosakele kuba akukho mahluko phakathi kwegama lale modeli unayo kodwa ubhekisa kwezi Ziimodeli ezintsha kodwa khangela nje kwi-san google xD ukuze undiqonde okanye ujonge umfanekiso weposti kwaye uya kubona ukuba ayifani.
Umahluko kukuba le unayo unayo ibizwa ngokuba yi-x mini mini x10 pro kwaye le ibizwa ngokuba yi-xperia mini pro (efanayo kwabo bangengabo, kuphela i-x10 isuswe) kunye neprosesa ye-x10 ine-600mhz enye i-1ghz nayo ndinekhamera yangaphambili (nangona ingacacanga kum, bendiqonda ukuba yi-minipro kuphela enolu khetho kodwa ngokwenqaku kubonakala ngathi bobabini bazakuzisa ikhamera yangaphambili)
Enkosi ngengcaciso. Ukusuka kwinto endiyibonayo, iguqule kuphela isoftware kunye nekhamera yangaphambili. Ke ndibuze kwakhona (kuya kufuneka wazi ngakumbi ngalo mbandela): Ngale nto mancinci amathuba okuba i-Xperia x 10 mini ihlaziye i-2.2 nokuba kunjalo? Kukho neendaba ezithile ukuba kuyakubakho uhlaziyo okanye kuya kuthi ubambelele apho ubomi ?! (Kuya kuba lusizi kum ukwazi ukuba ayizukuhlaziya ngakumbi)
Ewe, cesxr, ndingumlandeli wolu ngcelele lweeselfowuni, ndizithanda kakhulu kwaye ndihlala ndisiya ngaphezulu kwaye ndihlala phambili kwabo benza ezi Smartphones, kwaye ndinayo i-xperia x10mini, kwaye ngendlela efanayo Ndingathanda ukwazi ngohlaziyo lwesoftware yakho, kwaye ndifunde kwezinye iibhlog ekubonakala ukuba azisayi kuphinda zibe khona kuhlaziyo lwethu, leyo yinto embi, kwaye nakwiiapps, banqunyelwe kwimemori yangaphakathi yeXperia eyi-200MG, awunakubahambisa kwimemori yangaphandle (sd), kodwa ngaphandle kotshintsho kunye nesoftware yexesha elizayo (ukusuka ku-2.2 ukubheka phambili) ukuba ungahambisa iiapps zakho kwikhadi le-sd kwaye ngale ndlela ungaqhuba amakhulu ezicelo, kwaye kungaphelelanga apho enye. Ndiyathemba ukuba le inf isebenzile.
(eyam yeXperia x10mini ndinayo ukusukela ngoDisemba ka-2010 kwaye ndinokufumana kuphela uhlaziyo lwe-eclair lwe-2.1)
Ewe, ndiyifumene inomdla, kananjalo kukuba ziiselfowuni onokuthi uhambe epokothweni yakho ungabonwa, nto leyo etsala izaphuli-mthetho ezininzi ngobukhulu obugqibeleleyo, nohlobo lwe-android, kwaye ndifundile ukuba ezi Smartphones zinamava amahle kuFacebook, wena unokubeka izimvo kwifoto ngaphandle kokukubeka kufacebook okumnandi kubonakala kum
yonke i-Xperia eyayiphuma ngo-2011 iya kuba nohlaziyo lwe-Android 4.0 ice cream yesandwich. Umhla wokuhlaziywa awukabikho, kodwa ziindaba ezimnandi kakhulu kuba nam ndineXperia x10 mini. Ndikunika idilesi yam ye-imeyile. andresledesma45@gmail.com
UJulio Estuardo Cajas Vasquez sitsho
Iselfowuni elungileyo kakhulu, ukuza kuthi ga ngoku eyona nto ibalaseleyo endinayo (emva kwe-W810i kunjalo)
Phendula uJulio Estuardo Cajas Vásquez
Ngaba le fowuni ifikile eVenezuela? Lithini ixabiso layo?
Phendula ku -A.